लुम्बिनी खुकुरी र वेष्टर्न फाइनलमा – WicketNepal
लुम्बिनी खुकुरी र वेष्टर्न फाइनलमा
WicketNepal Staff, २०७३ चैत्र १०, बिहीबार ००:००
विकेटनेपाल, भैरहवा, १० चैत ।
रुपन्देही क्रिकेट संघको आयोजनामा भैरहवास्थित सिद्धार्थ रंगशालामा जारी शशिकान्त–सकुन्तला बर्मा टि–२० क्रिकेट प्रतियोगितामाको फाइनलमा खुकुरी र वेष्टर्न प्रतिस्पर्धा गर्ने भएका छन् ।
बिहीबार भएको पहिलो सेमिफाइनल खेलमा लुम्बिनी खुकुरी क्रिकेट क्लब बेलहियाले बुम एमसिसी भैरहवालाई ६३ रनले पराजित गर्दै फाइलन पुगेको छ ।
टस जितेर पहिला ब्याटिंग गरेको खुकुरीले निर्धारित खेलमा ५ विकेटको क्षतिमा १ सय १८ रन बनायो । उसका लागि रोहित पौडेलले नटआउट ६४, कप्तान अन्तिम थापाले १७, निश्चल चौधरी १६ र लालबहादुर अधिकारीले नटआउट १५ रन बनाए । बलिंगमा एमसिसीका लागि सन्दीप केसी, रोशनलाल गुप्ता, भिमबहादुर सुनार र तुलाराम थापाले समान १।१ विकेट लिए ।
जवाफी ब्याटिंगमा मैदान छिरेको एमसिसीले निर्धारित खेलमा १७.५ बलमा सबै विकेट गुमाउँदै ८५ रनमात्र बनाउन सक्यो । उसका लागि सन्दीप केसीले १४, भिमबहादुर सुनारले १३ रन बनाए । बलिंगमा खुकुरीका लागि मानबहादुर थापा, शाह आलम, दर्गेश गुप्ता र लालबहादुर अधिकारीले समान २।२, रोहित पौडेल र इकलाख अहम्मदले समान १।१ विकेट लिए । खेलको म्यान अफ द म्याच खुकुरीका रोहित पौडेल घोषित भए ।
त्यस्तै बिहीबारै भएको दोस्रो खेलमा वेष्टर्न क्रिकेट क्लब बुटवलले न्यू होराइजन क्रिकेट क्लब बुटवललाई १३रनले पराजित गर्दै सेमिफाइनल पुगेको छ ।
टस जितेर पहिला ब्याटिंग गरेको वेष्टर्नले निर्धारित खेलमा ९ विकेटको क्षतिमा १ सय ३८ रन बनाएको थियो । उसका लागि सन्दीप सुनारले ४८, प्रकाश केसीले २६ र राहुल विकले २२ रन बनाए । बलिंगमा होराइजनका लागि कुशल मल्ल र युवराज सेनले समान २।२, शक्ति गौचन, निर्मल थापा र गणेश गौडेलले समान १।१ विकेट लिए ।
प्रतिउत्तरमा मैदान छिरेको होराइजनले निर्धारित खेलमा ८ विकेटको क्षतिमा १ सय २५ रनमै समेटियो । उसका लागि विशाल खत्रीले ३८, नूरध्वज सेनले २१ र राजु शाहीले १८ रन बनाए । बलिंगमा वेष्टर्नका धिरज शाही र विक्रम भुसालले समान २।२ विकेट लिए । खेलमा वेष्टर्नका सन्दीप सुनार म्यान अफ द म्याच घोषित भएको रुपन्देही क्रिकेट संघका अध्यक्ष प्रशान्त विक्रम मल्लले जानकारी दिए ।
प्रतियोगिताका विजेताले नगद रु. ५० हजार र ट्रफी, उपविजेताले नगद रु. २५ हजार र ट्रफी प्राप्त गर्नेछन् । उत्कृष्ट खेलाडीले नगद रु. १० हजार, बेष्ट ब्याट्सम्यान तथा बेष्ट बलरले नगद रु.५/५ हजार प्राप्त गर्नेछन् । प्रतियोगिता चैत १२ गते सकिनेछ । प्रतियोगितालाई अमेरिका निवासी विवेक बर्माले आफ्नो स्वर्गीय आमा÷बुवाको नाममा स्पोन्सर गरेका छन् । स्वर्गीय शशिकान्त बर्मा रुपन्देही जिल्लाको क्रिकेट खेलको विकासमा अम्पायर तथा खेलाडीको रुपमा योगदान पु¥याउने व्यक्तित्व मानिन्छन् भने स्वर्गीय सकुन्तला बर्मा रुपन्देही जिल्लाको महिला नेतृ थिइन् ।